नाटोसँग रुसको समस्या र चाहना के ? नाटोको मामिलामा युरोप कति एकताबद्ध ? :: NepalPlus
नाटोसँग रुसको समस्या र चाहना के ? नाटोको मामिलामा युरोप कति एकताबद्ध ?
आलादाईर स्यान्फर्ड२०७८ फागुन ३ गते २२:२३
रुस के चाहन्छ ?
नाटो विषयमा युरोप कत्तिको एकताबद्ध ?
वास्तविकता के हो भने नाटोमा अमेरिका वास्तवमा एक भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धी हो । उसले आफ्नो प्रभाव जमाउन खोज्छ । वास्तविक स्वायत्ततामा कडा सीमाहरू लगाउँछ । इयुको लिस्बन सन्धिले सदस्य राष्ट्रहरूलाई भन्छ ‘सुरक्षा र रक्षा नीति नाटोसँग एकरूपता हुनुपर्छ ।
जित्ने को ? रुस ?
(एपी, एफपी, युरोन्युज, फ्रंस २४ न्युजको सहयोगमा)